आफ्नै बाबुद्धारा आमा निदाए पछि नावालिका छोरी माथि करणी – Khabar Patrika Np
आफ्नै बाबुद्धारा आमा निदाए पछि नावालिका छोरी माथि करणी
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख २३, २०७८ समय: १६:३३:२०
गम्भीर स्वास्थ्य अबस्थामा पुगेकी छोरी तर आमालाई मजदुरी गर्न जाने तयारिको चटारो थियो । अन्य दुई स साना छोरा छोरी कलेटी परेको शरीर लिएर बारिमा खेलिरहेका थिए । आमाको मुहारमा बाबू द्धारा छोरी पिडित बनेको पी डा खा सै झल्किन्थ्यो । छोरी माथी बाबुले पटक पटक यस्तो ब्यबहार गर्दा तपाईले किन निगरानी गर्नु भएन ? भन्ने प्रश्नमा उनको एक ठस्को जवाफ थियो ! खै मैले थाहै पाइन । त्यस पछि पीडित छोरीलाइ सोधियो ।